Philippines (4D/3N)KH - 7007 C
Day : 1 Yagon – Cebu (Dinner)
ရန်ကုန်မှ ညလေယာဉ်ဖြင့် Cebu မြို့သို့ transit ဖြင့်ထွက်ခွာပြီး၊ Cebu မြို့သို့ ၁၂ နာရီ ဝန်းကျင်တွင် ရောက်ရှိကာ3Stars Hotel တွင် check-in ဝင်ပြီး Filipino လူမျိုးတွေ၏ ယဉ်ကျေားဖော်ရွေမှုတွေကို ခံစာနိုင်ပြီး Hotel တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :2Oslob Whale Shark Watching with Cooldown at Aguinid Falls (Breakfast, Lunch & Dinner)
Hotel တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် local tour guide နှင့်အတူ Oslob သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ပါမည်။ Oslob တွင် whale shark ကြည့်ရှူရန်အတွက် local tour guide နှင့်အတူ Do & Don’t များကို လိုက်နာပြီး water activites များဆော့ကစားမည်။ ပြီးလျှင် နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပါမည်။ ထို့နောက် Eco-tourism site တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Agunid Falls တွင် Trekking, Swimming, etc. များဖြင့် အပန်းဖြေရင်း မှော်ဆန်သော ရေတံခွန်အလှကို ခံစားနိုင်မည်။ ထို့နောက် ညစာသုံးဆေင်ပါမည်။ ပြီးလျှင် hotel သို့ ပြန်လည် အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
Day :3Cebu and Mactan Twin City Tour (Breakfast, Lunch & Seafood Dinner)
Hotel တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနော် Cebu မြို့၏ သမိုင်းကြောင်းတွေ ယဉ်ကျေးမှု တွေကို Magellan’s Cross, Basilica Minore del Museum, Casa Gorordo Museum, Cebu Heritage Monument, Taoist Temple တို့တွင် သွားရောက်လေ့လာမည်။ ပြီးလျှင် နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပါမည်။ ထို့နောက် Mactan ကျွန်းတွင် ကျေးလက်နဲ့ မြို့ပြအလှ နှစ်မျိုးလုံးပေါင်းစပ်ထားသော ရွာလေးသို့ ရောက်ရှိမည်။ Lapu-Lapu, Mactan Shrine တွေမှာ လည်ပတ်ပြီးရင် local market, guitar factory, novelty shop, souvenirs ဆိုင်တွေကို shopping ထွက်ကြမယ်။ ပင်ပန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် seafood ညစာ သုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးလျှင် hotel သို့ပြန်လည် အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
Day :4Cebu- Philippines – Yangon (Breakfast)
Hotel တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် check-out လုပ်ကာ လေဆိပ်မှ ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြပါမည်။
Philipines:Golden price Hotel (or) similar 4star hotel
Price: USD 799 $
• Round trip international flight to Bangkok
•2nights Hotel accommodation with breakfast (Based on Twin Sharing / triple sharing).
• Transpartation throughout the trip as per itinerary
• English speaking guide & Tour leader
• Mineral water 1 bottle per pax per day on car
• Compulsory Tipping – for guide & driver in Bangkok
• 30% of Total amount upon confirmation of the tour.
• 50% of Total amount upon final name list date
• 20% of Total amount, 14 days before travel date.